Accc, Acsr Guy grips Manufacturers na Suppliers | China Accc, Acsr Guy grips Factory
Aluminum deadends eji na okporo osisi ma ọ bụ metal n'ụlọ elu niile dị na-ewu nke nnyefe netwọk na eletriki nkesa dabeere ACCC na ACSR eduzi.
Aluminum grips na-mere nke elu ike corrosion eguzogide aluminum alloy waya, kpuchie site ájá oyi akwa na gluu, ike ga-eji na ihe ọ bụla gburugburu. Helical aluminum grips na-iji jide full gosiri ike nke aluminum (ACC), ma ọ bụ aluminum alloy (ACCC), ma ọ bụ aluminum kpuchie ígwè (ACSR) eduzi.
Abụkarị arụnyere na-eduzi, na-achọ ihe ọ bụla ngwaọrụ.
Jera preformed mmepụta akara bụ ike ịgbanwe waya kpụrụ nwụrụ anwụ nsọtụ dị ka data mpempe akwụkwọ ahịa 'USB.
Jera nwere zuru ezu nso nke ule ngwá n'ihu ụdị ule nke heliformed nwụrụ anwụ nsọtụ si preformed akara ngwaahịa nso.
Anyị na-elekwasị anya na àgwà na-ezu nso nke ígwè kpụrụ grips, nke na-agụnye: eriri optic cable nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ Ihọd grips, nkwusioru grips, n'akụkụ agbatị, ejima agbatị, insulator n'elu agbatị, agha mkpara, full erughị ala splices, casted thimbles, osisi oyiyi akwa (arịlịka nkpọrọ olu, bọl anya), ngagharị akara damper wdg